ငါဖောက်သည်တွေအတွက်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အသစ်တစ်စီးဝယ်လိုက်တယ် Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, ဇန်နဝါရီလ 9, 2020 ကြာသပတေးနေ့, ဇန်နဝါရီလ 9, 2020 Douglas Karr
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်သည်သူတို့၏အွန်လိုင်းတည်ရှိမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်အကြီးစားခေါင်မိုးကန်ထရိုက်တာတစ် ဦး အားအကြံပေးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများကိုဖမ်းယူရန်အတွက်ယိုယွင်းနေသောလှုပ်ရှားမှုကိုစတင်ခဲ့ပြီး၎င်းတို့၏စီမံကိန်းများကိုအွန်လိုင်းပေါ်တွင်စတင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ သို့သော်ပျောက်ဆုံးနေသောအရာတစ်ခုမှာဂုဏ်သတ္တိများဓါတ်ပုံမတိုင်မီနှင့်ပြီးနောက်ဖြစ်သည်။
သူတို့ရဲ့အကိုးအကားများနှင့်စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကို login လုပ်ခြင်းဖြင့်မည်သည့်ဂုဏ်သတ္တိများကိုပိတ်ထားသလဲ၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းတစ်တန်အွန်လိုင်းကိုဖတ်ပြီးနောက်, ငါဝယ်ယူခဲ့သည် DJI Mavic Pro မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်.
မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်သည်ကောင်းမွန်သောဓာတ်ပုံများရိုက်ကူးပြီးပျံသန်းရန်လွယ်ကူသော်လည်းအမှန်တကယ်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်လည်ပတ်ခြင်းတို့သည်အလွန်ပင်နာကျင်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ DJI သို့ ၀ င်ရန်လိုသည်။ iPhone application တစ်ခုဟုထင်ရသည်၊ ဖုန်းကို Controller နှင့်ချိတ်ဆက်သည်။ ပို၍ ဆိုးသည်မှာလေယာဉ်တိုင်းတွင် login လုပ်ရသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ကန့်သတ်နယ်မြေတွင်နေထိုင်ပါကကျွန်ုပ်၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုလည်းမှတ်ပုံတင်ရမည်။ ငါမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ကိုစီမံကိန်းတစ်ဒါဇင်လောက်သုံးပြီးအဲဒီစာချုပ်ချုပ်ပြီးတဲ့အခါဖောက်သည်ကိုရောင်းလိုက်တယ်။ ဒါဟာမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ကောင်းကောင်း၊ သူတို့ဒီနေ့သုံးနေတုန်းပဲ။ ၎င်းသည်သုံးစွဲရန်မလွယ်ကူပါ၊ ၎င်းတွင်အဓိပ္ပာယ်ရှိသည့်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုမရှိပါ။
တစ်နှစ်လျင်မြန်စွာရှေ့သို့ပြေး။ ကျွန်ုပ်၏ Midwest ဒေတာစင်တာသည်ခေတ်သစ်အဆင့်မြင့်အသစ်တစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်နေသည် ဝိန်း Fort ဝိန်းအတွက်ဒေတာစင်တာ, အင်ဒီယားနားတွင် EMP ဒိုင်းလွှားပါရှိသည်။ ငါမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ရိုက်ချက်များရိုက်ကူးဖို့အချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်, ဒါကြောင့်ငါဒေသတွင်းရှိအချို့သောဓာတ်ပုံဆရာများနှင့်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးပညာရှင်များဖမ်းယူတယ်။
အလုပ်အတွက်ကျွန်ုပ်ရရှိသောကိုးကားချက်များသည်အလွန်စျေးကြီးပြီးကုမ္ပဏီ၏တည်နေရာ ၃ နေရာ၏ဗွီဒီယိုနှင့်ဓာတ်ပုံများကိုရိုက်ရန်အနိမ့်ဆုံးမှာဒေါ်လာ ၃၀၀၀ ဖြစ်သည်။ မောင်းနှင်မှုအချိန်နှင့်ရာသီဥတုကိုမှီခိုနေရခြင်းကြောင့်၎င်းသည်နက္ခတ္တဗေဒဆိုင်ရာမဟုတ်ပေ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ထိုကုန်ကျစရိတ်မျိုးကိုမခံချင်ပါ။
Autel စက်ရုပ် EVO
ငါအွန်လိုင်းမှ ထွက်၍ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများကိုပိုမိုဖတ်ရှု။ စျေးကွက်ထဲမှကစားသမားအသစ်သည်လူကြိုက်များလာသည်ကိုတွေ့ရသည် Autel စက်ရုပ် EVO။ Controller မှာပါ ၀ င်တဲ့ screen ပါဝင်ပြီး login ဝင်စရာမလိုဘဲမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ကိုဖယ်ထုတ်ပြီးပျံသန်းနိုင်ပြီးကျွန်ုပ်လိုအပ်တဲ့ဗီဒီယိုများနှင့်ဓာတ်ပုံများကိုလည်းရိုက်ကူးနိုင်ပါပြီ။ ၎င်းတွင်အလုံအလောက်မြင့်မားသောမျက်နှာကျက်ရှိပြီး FAA ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်းသို့မဟုတ်၎င်းကိုပျံသန်းရန်မလိုအပ်ပါ။ တပ်ဆင်ထားခြင်းမရှိ၊ ဆက်သွယ်ထားသောကေဘယ်ကြိုးများသာ၎င်းကိုဖွင့ ်၍ ပျံသန်းပါ။ ဒါဟာအံ့…စရာကောင်းပြီးတကယ် Mavic Pro ထက်စျေးကြီးတယ်။
ရှေ့ EV တွင်တပ်ဆင်ထားသော EVO သည် 3-axis stabilization gimbal တွင်အားကောင်းသည့်ကင်မရာတစ်လုံးလျှင် 4k resolution ဖြင့်တစ်စက္ကန့်လျှင် ၆၀ ဖရိမ်နှင့် H.60 (သို့) H.100 codec တွင် ၁၀၀mbps အထိအထိဖမ်းယူနိုင်သည်။
Real-glass မှန်ဘီလူးများကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် EVO သည်အသေးစိတ်နှင့်အရောင်အတွက်ကျယ်ပြန့်သောရွေ့လျားမှုအကွာအဝေးရှိ 12 megapixels ရှိရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဓါတ်ပုံများကိုဖမ်းယူသည်။
EVO သည်ပျံသန်းချိန်ကိုမိနစ် ၃၀ အထိ ၄.၃ မိုင် (30KM) ဖြင့်ဂုဏ်ယူစွာဖော်ပြသည်။ ဒါ့အပြင် EVO ဟာ failsafe features တွေကိုပေးထားပြီးဘက်ထရီအားနည်းနေချိန်၊ အိမ်ကိုပြန်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီဆိုတာသိစေတယ်။
EVO တွင် ၃.၃ လက်မအရွယ် OLED မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားပြီးသင့်အားဝေဖန်သောလေယာဉ်သတင်းအချက်အလက်ပေးသောသို့မဟုတ် 3.3p HD ဗီဒီယိုထည့်သွင်းပေးသောအဝေးထိန်းခလုတ်တစ်ခုပါ ၀ င်သည်။
Apple iOS သို့မဟုတ် Android ထုတ်ကုန်များအတွက်အခမဲ့ Autel Explorer အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး၊ ဝေးလံခေါင်သီသော Controller နှင့်ဆက်သွယ်ပါ၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောချိန်ညှိချက်များနှင့် Dynamic Track၊
Evo တွင်ဖိုင်များကိုလွယ်ကူစွာလွှဲပြောင်းရန် Micro SD slot တစ်ခုရှိသည်။
ငါမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်တင်ဆောင်များအတွက်အပိုဘက်ထရီများနှင့်ပျော့အိတ်ဝယ်ယူခဲ့တယျ။ ၎င်းသည်သေသပ်စွာခေါက်။ သယ်ဆောင်ရန်လွယ်ကူသည်။
Autel စက်ရုပ် EVO Drone Bundle ကိုဝယ်ပါ
ဒေတာစင်တာအသစ်မှာငါတို့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အိမ်တစ်လုံးကိုဖွင့်ပြီးငါမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ကိုလွှင့်ပစ်လိုက်တယ်။ ဓာတ်ပုံတွေ၊ ဗွီဒီယိုတွေရိုက်တယ်၊ ဒေသခံစာနယ်ဇင်းတွေကအဲဒီမှာရှိနေပြီးသူတို့ကသူတို့သတင်းတွေမှာနောက်ပိုင်းမှာသူတို့သုံးခဲ့တဲ့ဗွီဒီယိုတွေကိုငါတင်ပို့နိုင်ခဲ့တယ်။ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်အခြားသတင်းပြပွဲတစ်ခုကပိုင်ရှင်များကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပြီးဗီဒီယိုလည်းပါဝင်သည်။ ပြီးတော့၊ သူတို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုပုံနဲ့ဗီဒီယိုအပါအဝင်ပိုကောင်းအောင်လုပ်ခဲ့တယ်။ ပုံတွေဒီမှာပါ။
Lifeline ဒေတာစင်တာများ Drone Shots
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်သုံးစွဲခဲ့သောအကောင်းဆုံးဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ဖြစ်သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အလွန်ပျော်ရွှင်သောဖောက်သည်အတွက်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအမြတ်အစွန်းရရှိသည်။ အကောင်းဆုံးကတော့၎င်းမှာလုံးဝအလုပ်လုပ်ရန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာမလိုပါ။ ညွှန်ကြားချက်များကိုဖတ်ရုံနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောရိုက်ချက်များကိုသင်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းရိုက်နေသည်။ ငါတောင်မှယူ။ အကွာအဝေးထဲကပျံသန်းစမ်းသပ်ပြီး ... ကမိနစ်အတွင်းမှာပြန်လာ၏။ နောက်တစ်ခါကျတော့အဲဒါကိုသစ်ပင်တစ်ပင်ထဲပျံသန်းပြီးလှုပ်လိုက်တယ်။ ထိုအသေး, အခြားအချိန်, ငါကအိမ်၏ဘေးထွက်သို့ပျံသန်း ... ကအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်သမျှထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူး။ (၀ ီ!)
ဘေးထွက်မှတ်ချက် - Autel သည်ဤမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်၏နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းဖြစ်သော Autel Robotics EVO II ကိုကြေငြာခဲ့သည်။ သို့သော်လည်းကျွန်ုပ်သည် Amazon တွင်မတွေ့ရသေးပါ။
ထုတ်ဖော်: ငါသည်ဤဆောင်းပါးအတွင်း DJI နှင့် Amazon နှစ်ခုလုံးအတွက်တွဲဖက်ကုဒ်များကိုအသုံးပြုသည်။
Tags: အော်တိုEVO autel စက်ရုပ်EVO2autel စက်ရုပ်điDJI Mavicမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ဓာတ်ပုံများ
Featured ပုံများအတွက် WordPress ကို Enable လုပ်၍ ပိုကောင်းအောင်လုပ်နည်း